ကလေးလုပ်သား တိုက်ဖျက်ရေးအရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သင်ရိုး
ဤသင်ရိုးသည် လူမှုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (CSOs)အား ကလေးအလုပ်သမားအကြောင်း ပိုမိုနားလည်ရန် နှင့် လူမှုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ မှ အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် အပိုင်းကို သိရှိရန်အတွက် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသင်ရိုးလက်စွဲစာအုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော လူမှုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် နှင့် ပုံဖော်ရေးဆွဲရန် ပစ္စည်းများ အထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။
Combating child labour in Myanmar: A course for Civil Society Organizations (CSOs)
This course has been designed to help Civil Society Organizations (CSOs) to better understand child labour, and the key role they can play to address it. This course kit also includes practical guidance, support and materials to design and conduct workshops on child labour for CSOs in Myanmar.
ကလေးလုပ်သား တိုက်ဖျက်ရေး အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် သင်ရိုး
ဤသင်ရိုးသည် အလုပ်ရှင်များအား ကလေးအလုပ်သမားအကြောင်း ပိုမိုနားလည်ရန်နှင့် အလုပ်ရှင်မှ အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်အပိုင်းကို သိရှိရန်အတွက် ပုံဖော်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသင်ရိုးလက်စွဲစာအုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် နှင့် ပုံဖော်ရေးဆွဲရန် ပစ္စည်းများ အထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။
Combating child labour in Myanmar: A course for Employers’ Organizations
This course has been designed to help employers to better understand child labour, and the key role they can play to address it. This course kit also includes practical guidance, support and materials to design and conduct workshops on child labour for employers’ organizations in Myanmar.
Drivers and constraints for occupational safety and health improvement in the ginger global value chain from Myanmar
Myanmar is the seventh largest producer of ginger in the world and it hasahigh potential to expand its exports. Cultivation of ginger representsamajor cash crop for smallholders andasource of income for individuals in rural areas, such as in South Shan, where the majority of Myanmar’s ginger is grown.
နိုင်ငံစုံအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြေညာစာတမ်း ပါ စည်မျဉ်းများ” (အကျဉ်းဖော်ပြချက်)
နိုင်ငံစုံအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စည်းမျဉ်းများနှင့် လူမှုဘ၀မူဝါဒဆိုင်ရာ သုံးအုပ်စုစုံညီ ကြေညာစာတမ်း
ယခုကြေညာစာတမ်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အားလုံးပါဝင်သော၊ တာဝန် ယူသော ၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသောလုပ်ငန်းခွင်အလေ့အကျင့်များအတွက်တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုပေးသည့် အိုင်အယ်လ်အို၏ ကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှအစိုးရများ၊အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများ ၏ အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကရိယာဖြစ်သည်။ ကြေညာစာတမ်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်(၄၀)ကျော်သို့ချဉ်းကပ်လာပြီဖြစ်ပြီး (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နှင့်၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်မှုများရှိခဲ့)၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
သငျ့လြျောကောငျးမှနျသောအလုပျအကိုငျ ဌာနအေစီအစဉျ ၂၀၁၈ - ၂၀၂၂
Myanmar Decent work Country Programme 2018-2022
The Decent Work Country Programme sets out ILO’s programme priorities for Myanmar for the period 2018-2022.